अघिल्लो दिन कोरोना नेगेटिभ भएको मान्छे भोलिपल्ट कसरी पोजेटिभ हुन्छ? : पौडेल - News20 Media
April 29, 2021 N20LeaveaComment on अघिल्लो दिन कोरोना नेगेटिभ भएको मान्छे भोलिपल्ट कसरी पोजेटिभ हुन्छ? : पौडेल
लुदअ बैशाख १६, काठमाण्डौ
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चामा सांसद लुकाउन केन्द्र सरकारको शक्ति प्रयोग भएको बताउनुभएको छ । नेता पौडेलले केन्द्र सरकार र एमालेको निर्देशनमा कास्कीका अस्पतालहरूले सांसदलाई षडयन्त्रमा पारेर लुकाएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता पौडेलले सांसदको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै घटनाको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने बेलामा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही फोन स्विच अफ गरी ‘हराउनुभएको’ थियो ।
नेता पौडेलले एमालेले जनमोर्चाका सांसद शाहीलाई अपहरण शैलीमा अस्पतालमा लगेर बन्धक बनाउनु राजनीति सिद्धान्त र निष्ठामा रहेको जनमोर्चा जस्तो पार्टीको आदर्शमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । खिमविक्रम शाही प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पनि नेता पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘किर्ते–नक्कली बहाना बनाएर, अघिल्लो दिन कोरोना नेगेटिभ भएको मान्छे भोलिपल्ट कसरी पोजेटिभ हुन्छ रु यसमा षड्यन्त्र छ । मैले भन्ने गरेको छु विभिन्न तरिकाले पैसा कमाउने, पैसाले सत्तामा पुग्ने, सत्ता चलाउने, यो लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भयो । खिमविक्रम शाही प्रकरण लोकतान्त्रिक देशका लागि गम्भीर प्रश्न हो । यो देशको व्यवस्थामा यस्ता खेल, किर्ते जालसाजी खेल, अलोकतान्त्रिक षडयन्त्रको छानबिन हुनुपर्छ ।’
काठमाण्डौसहित देशका पहाडी क्षेत्रमा असिना पानी
भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि चार धाम यात्रा रद्द
सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै धेरैलाई अनुमति
April 23, 2021 N20
टिकटक का’ण्डकि सिमरन रुदैँ आइन् मिडियामा, खाेलिन् हराउनुकाे रह’स्य ( भिडियो हेर्नुस )